General Koronto;”Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle ma matalaan shacabka Banaadir” – Banaadir weyne
Taliyihii hore ee Qeybta 27-aad ee xoogga dalka Jeneral Maxamuud Maxamed Macalin “Koronto” ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho iyo hadal ay jeediyeen Cali Maxamed Geedi ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo Salaad Cali Jeelle.
“Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle waa nimanka kala qeybiyay dadka Banaadir oo horay uga soo fashilmay dalka inay maanta dowladda u hadlaan waa nasiib darro, dadkaas Banaadir kuma qancaan inay ku hadlaan oo ay ku soo horkacaan, waxay abuureysa waxyaabo horay loo iloobay in la soo xusuusto, Madaxweynaha waxaa loo qaadanayaa inuu raalli ka yahay, nimankaas mama talaan dadka Banaadir waa dad taariikhdooda qoran tahay oo dhibaatooyin u geystay dadkaan”ayuu yiri general Koronto.
“Waxa uu ku dhashay Madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho,waxaa lagu dhex doortay Muqdisho waa Madaxweynihii ugu nasiib badnaa waana Muqdushaawi.”ayuu yiri General Koronto.
“Talo ayaan u soo jeedinayaa Madaxweynaha oo ah in uu soo farogeliyo khilaafka ka dhex jira Baarlamaanka iyo ciidamada Qaranka oo lagu tilmaamay qabiil.”ayuu yiri General Koronto.
“Madaxweynaha waa taliyaha guud ee qaranka waxaana ciidanka maamulaya dad kale oo aan sharci u haysan.”ayuu sii raaciyay General Koronto hadalkiisa.
General Koronto ayaa sidoo kale waxa uu ka shirkiisa jaraa’id ku soo qaaday culumaa’udiin ka hadashay banaanbax la sheegay inuu ka dhacayo Muqdisho iyo weliba qaar kamid ah duubabka dhaqanka. – Jowhar News